Nubia Z18 oo lagu dhawaaqi doono Sebtember 5 | Androidsis
Waxaa ka mid ah xan badan iyo mala-awaal ku saabsan taleefanka casriga ah ee Nubian ee soo socda, Shirkadda ZTE ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqday dhamaadka-xiga ee soo socota, Nubia Z18, bisha Sebtember 5teeda.
Tani waxaad ku sameysay Weibo, Shabakadda bulshada ee Shiinaha, oo ah hab ay shirkadaha Aasiya u muuqdaan inay ku dhawaaqaan, sida Meizu, Huawei iyo noocyo kale oo caan ah. Halkaas, iyada oo loo marayo boodhadh, Nubia ayaa ku dhawaaqday warkan.
Sida ku xusan boostada Weibo, Nubia Z18 waxaa lagu dhawaaqi doonaa Sebtember 5. Tani waa isla taariikhda sii-deynta ee Sharaf 8X, marka lagu daro aaladaha kale, sidaan xasuusano inay tahay maalinta ugu dambeysa IFA ee magaalada Berlin, Jarmalka, iyo, dhacdada oo dhan, dhowr mobiles ayaa la soo bandhigi doonaa. Waad ku mahadsan tahay xaqiiqda ah in taariikhdan ay ku soo beegantay tan, waxaa la filayaa in terminal-ka lagu soo bandhigi doono carwadan tikniyoolajiyadda.
Weydiinta wax badan oo ku saabsan waxa Nubia noo keydsan tahay, boodhadhku wuxuu muujinayaa sawirka taleefanka wuxuuna xaqiijinayaa in wuxuu la imaan doonaa qori yar oo la mid ah aasaasiga PH-1 iyo kan Oppo F9.
Markii hore, liistada TENAA ee Nubia Z18 ayaa shaaca ka qaaday in taleefanka uu yeelan doono shaashad dhan 5.99-inch oo FullHD + ah oo xallinkeedu yahay 2.160 x 1.080 pixels (18: 9).
Ogow: Nubia Z18 ayaa ka muuqda Geekbench oo ay weheliso astaamaheeda muhiimka ah
Waxaa sidoo kale la filayaa inay ku shaqeyso a Processor Qualcomm Snapdragon 845 oo leh 6 GB oo RAM ah oo ah nooca aasaasiga ah iyo 8 GB oo RAM ah oo ah nooca ugu horumarsan. Kaydintu waxay noqonaysaa 64GB iyo 128GB siday u kala horreeyaan. Dhanka optics-ka, Nubia waxay hirgelinaysaa laba 24MP iyo 8MP combo xaga dambe ah, halka sawirka sawirka 8MP uu kujiro qaanuunka kore ee shaashadda.
Ugu dambeyntiina, taleefanka casriga ahi wuxuu la imaan doonaa akhristaha sawirka dambe ee dhajinta iyo tiknoolajiyada aqoonsiga wajiga. Intaa waxaa dheer, wax walba ayaa tilmaamaya wuxuu ku imaan doonaa batari 3.350 Mah ah iyo Android 8.1 Oreo oo ah nidaamka qalliinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » ZTE waxay soo bandhigi doontaa Nubia Z18 tan bisha Sebtember 5teeda
Sida loo raadsado shaqada Google ee Shaqooyinka qalabkaaga Android